Excel ကိုပြုပြင်ရေးကိရိယာ။ Excel ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆော့ဝဲ။ Excel ဖိုင်များကို Fix ။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Excel Repair?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost Excel ကိုပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်ကုန်၏အရေးကြီးသောစံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍၊ DataNumen Excel Repair အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်စျေးကွက်ရှိအခြားပြိုင်ဖက်များထက်များစွာသာလွန်သည်။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen Excel Repair ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
Eugenio G. အ Bahamondes
DataNumen Excel Repair တစ်နေ့တာကိုသိမ်းဆည်းပြီးကျွန်ုပ်၏ပျက်စီးနေသောဖိုင်မှကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်, ငါ့အဘို့အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်နိုင်ငံ
ဒါဟာလှလှပပအလုပ်လုပ်ခဲ့! ကျွန်ုပ်၏အသုံးအနှုန်းများနှင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးသော (အပြန်အလှန်ရည်ညွှန်းထားသော) အပြန်အလှန်ကိုးကားထားသောအချက်အလက်များအားလုံးသည်ယခုပြန်လာပြီဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! ငါနွေရာသီကာလအတွင်းငါရှိခဲ့ပါတယ်
Brownwood, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, USA
သြဂုတ်လ 13th, 2014
Excel ပြုပြင်ရေးကိရိယာသည်ပျက်စီးနေသော Excel ဖိုင် ၂ ခုမှစာသားဒေတာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးကျွန်ုပ် PC ပျက်စီးသွားသောအခါကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။
ဇန်နဝါရီလ 1st, 2017
Excel သည်“ filename.xslx” တွင်မဖတ်နိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
filename.xls 'ကိုကြည့်။ မရပါ
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Excel Repair v3.6
Excel xls, xlw နှင့် xlsx ဖိုင်များကို Excel ဗားရှင်း ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၉၅၊ ၉၇၊ ၂၀၀၀၊ XP၊ 3, 4, 5, 95, 97, 2000 နှင့် Office 2003 အတွက် Excel တွင်ပြင်ဆင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
Windows နှင့် Mac အတွက် Excel မှထုတ်ပေးသော Support files
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည် Windows Explorer ၏ဆက်စပ်မီနူးဖြင့် xls နှင့် xlsx ဖိုင်များကိုလွယ်ကူစွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
command line parameters များမှတဆင့် Excel ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Excel Repair Corrupt Excel ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်
သင်၏ Microsoft Excel .xls, .xlw နှင့် .xlsx ဖိုင်များသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပြီးသင် Excel ဖြင့်အောင်မြင်စွာဖွင့ ်၍ မရပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ DataNumen Excel Repair ပြtheနာကိုဖြေရှင်းဖို့။ ၎င်းသည်အဂတိလိုက်စားသောဖိုင်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးအမှားကင်းသောဖိုင်အသစ်ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်။ ။ Excel ဖိုင်နှင့်အတူပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းကိုပြန်လည်ရယူမီ DataNumen Excel Repairဖိုင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ပါ။ Microsoft Excel ကိုပိတ်ပါ။
ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော Excel ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
Excel ဖိုင်နာမည်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်နှိပ်နိုင်သည် ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen Excel Repair ပုံသေ Excel ဖိုင်ကို .xls ဖိုင်အတွက် xxxx_fixed.xls နှင့် .xlsx ဖိုင်အတွက် xxxx_fixed.xlsx ဖိုင်သစ်သို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ xxxx ရင်းမြစ် Excel ဖိုင်၏အမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ Excel ဖိုင် Damaged.xls အတွက်မူသတ်မှတ်ထားသောဖိုင်အတွက်ပုံမှန်အမည်မှာ Damaged_fixed.xls ဖြစ်သည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ထည့်ပါ။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen Excel Repair အလိုလိုtart Excel ဖိုင်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ ပြုပြင်ပါ။
ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင် Excel ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါကအောက်ပါစာတိုလေးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခု Excel ဖိုင်ကို Microsoft Excel ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။
DataNumen Excel Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Excel Repair ၂.၉ ကို ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Excel Repair ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Excel Repair ၃.၂ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်၊
DataNumen Excel Repair 2.6 ကိုဇွန်လ 8, 2019 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen Excel Repair 2.4 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Excel 2019 ကိုထောက်ပံ့သည်။
DataNumen Excel Repair 2.3 ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Excel 2016 နှင့် Office 365 အတွက် Excel ကိုအထောက်အပံ့ပြုသည်။
DataNumen Excel Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ဆဲလ်အရေအတွက် format ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
DataNumen Excel Repair 2.0 ကိုဇွန်လ 22, 2013 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Excel 2007, 2010 နှင့် 2013 ပုံစံများကိုထောက်ပံ့သည်။
DataNumen Excel Repair ၁.၄ ကိုမေလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Excel Repair ၁.၂ ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် ၂၀၀၄ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Excel Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Excel Repair 1.0 ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
xls နှင့် xlw ဖိုင်များကို Excel ဗားရှင်း ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၉၅၊ ၉၇၊ ၂၀၀၀၊ XP၊3ပုံစံများတွင်ပြင်ဆင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည် xls ဖိုင်ကို Windows Explorer ၏ဆက်စပ်မီနူးဖြင့်လွယ်ကူစွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။